कालिञ्चोक एफ.एम - विकिपिडिया
मनोरञ्जन ,सूचना, हाँस्यव्यंग्य
कालिन्चोक एफ.एम दोलखा जिल्लाको पहिलो समुदायिक रेडियो स्टेसन हो। यो रेडियो १०६.४ मेगाहर्जमा दोलखा र दोलखा जिल्लाका आसपासका विभिन्न १८ जिल्लामा प्रतक्ष र इन्टरनेटको मध्यमबाट देश विदेशमा बस्ने श्रोताले सुन्न सकिन्छ। यस रेडियोले विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। यो एफ.एमले विहान ५ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म दैनिक १८ घण्टा प्रसारण गर्ने गर्दछ ।
२ प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू
२.१ गजलका थुँगाहरू
१०६.४ मेगा हर्ज
प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू[सम्पादन गर्ने]
कालिञ्चोक एफ. एम. ले बिहानदेखि रातिसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेर श्रोताहरूलाई मनोरंजन सूचना र समचारहरू दिने गर्दछ।
गजलका थुँगाहरू[सम्पादन गर्ने]
कालिञ्चोक एफ.एम १०६.४ मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम गजलका थुँगाहरू साप्तहिक रात्रीकालीन कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको शनिबार बि.बि.सि समचार पछि आउने गर्दछ। यस कार्यक्रम मार्फत ति डयरी भित्र कुन्ठित रहेका गजललाई बहिरा प्रस्फुटन गर्ने गर्दछ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कालिञ्चोक_एफ.एम&oldid=896033" बाट अनुप्रेषित